Hoyga Wararka Marar | Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad Dhinacyo badan Taabatay U Jeediyay Shacbiga Somaliland
Posted on May 18, 2015 by mararnews
Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad Dhinacyo badan Taabatay U Jeediyay Shacbiga Somaliland
Mudane Siilanyo oo Salaamaya Dadwaynihi iskugu soo baxay 18 may
Hargeysa-(Mararnews)-Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa sheegay in Somaliland ay ku filan tahay xalinta khilaafaadkeeda gudaha ee ka dhashay dib u dhacii doorashooyinkii lagu waday inay badhtamaha sannadkan ka qabsoomaan dalka.
Madaxweynaha Somaliland waxa uu sidaasi ka sheegay khudbad dheer oo uu ugu tallo-galay shacbiga Somaliland munaasibadda 24 guurada ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii madax-banaanidda Somaliland ee 18-ka May oo maanta looga debbaal degay guud ahaan goboladda iyo degmooyinka dalka oo dhan.
Madaxweynuhu waxa kale oo uu ka digay ciidammo dawladaha caalamka qaarkood ay u samaynayaan Soomaaliya oo la sheegay in loogu tallo-galay inay soo celiyaan midnimadii Soomaaliya ee burburtay, waxaannu madaxweynuhu sheegay in dhismaha ciidammadaasi ay mandaqadda geeska afrika ku soo kordhinayaan dagaalo hor leh oo saamayn taban ku yeelan kara mandaqadda oo dhan.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo khudbadiisii oo dhamaystirani waxay u dhignayd sidan:-
“Walaalayaal,Ugu horrayn waxaan shacbi waynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu hambalyeynayaa meel ay joogaanba 24 guurada ka soo wareegtay xuska munasibadda qaranka ee 18 ka May. Si gaar ah waxaan bogaadin u dirayaa geesiyaasha ciidammada qaranka kala duwan ee hadh iyo habeen heeganka u ah adkaynta amniga iyo difaaca dalka hooyo.
Beesha caalamka waxan uga mahadnaqaynaa taageerada dhinacyada kala duwan ee ay siiyaan Somaliland, gaar ahaan gacanta ay ka gaystaan arrimaha doorashooyinka iyo taabbo-gelinta dimuqraadiyada. Somaliland waxay aaminsan-tahay in xidhiidh wanaagsan iyo iskaashi xoogan ay la yeelato bulshada caalamka, kaas oo ku dhisan is qadarin iyo dano-wadaag. Qaar ka mida wakiillada dawladaha innaga taageera Doorashooyinka, waxaa ka muuqda inuu gaadhay warar xaqiiqada ka fog, kuwaas oo keenay in ay welwel ka muujiyaan dib-u-dhacaa yimid. Saaxibadayo, waxaan xasuusinaynaa in aannu ummad ahaan dhaqan iyo waayo aragnimo weyn u leenahay xakamaynta iyo xal-u-helidda khilaafyada siyaasiga ah. Waxaan shaki ku jirin in Somaliland hore ugu guulaysatay, kana soo gudubtay dhibaatooyin iyo marxalado ka culus dib-u-dhaca doorashada maanta taagan, iyada oo aan cidina soo faro-gelin.
Si ay mandaqadda Geeska Africa u noqoto mid xasilloon oo ay shucuubteedu nabad ku wada nool yihiin, waxa Xukuumadayda ka go’an in ay sii xoojiso xidhiidhka iyo iskaashiga ay la leedahay dalalka Deriska.
Waxan ognahay in dhawaanahan la wado hindise ciidammo loogu dhisayo Somalia, kuwaasoo ay dalal ka mida Beesha Caalamku ku garab siinayaan. Madaxda Somalia ayaa iyaguna ku celceliya in ay ciidammadaas u abuurayaan soo celinta midnimadii Somalia ee burburtay 1991-kii. Haddaba, waxaanu uga digaynaa in ay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasillooni darro ku soo korodha mandaqadda Geeska Africa.
Somaliland ha guuleysato In sha ALLAH,,, Waad Mahadsan tihiin
Wassalaama calaykum wa raxmatulaahi wa barakaatuhu.”
ciidabka ka qayb galaya xaflada 18 may
Xafiiska wararka Mararnews.com ee hargaysa.